SANNAD OLOLE AH, 5 SANDOOD OO CABASHO AH | Somaliland Post
Home Maqaallo SANNAD OLOLE AH, 5 SANDOOD OO CABASHO AH
SANNAD OLOLE AH, 5 SANDOOD OO CABASHO AH
Wuxu yidhi “waa inaan hebel dooranaa”. Waxan ku idhi “waayo?”. Wuxu yidhi “haddaa ma hebelkaa kale ee aan nafta laheyn ayaan dooranaa?”. Wuxu raaciyey “kan ayaa ka fiican hebelkaa kale. Hebelkaa kale waa sidan iyo waa sidaa”. Waxan la yaabey qofkan doorashadiisa aan ku saleyneyn waxa uu doonayo iyo waxa uu qofkaa uu dooranayo ama ku jeclaadey ama ka rajeynayo, balse ku dooranaya qof kale oo uu necebyahay awgii ayuu kan u doonayaa. Taa macneheedu wuxu noqonayaa, ma hayo sababta iyo wanaagga iyo kartida uu leeyahay hebelkan uu jecelyahay. Mana sheegi karo taariikhda iyo aragtida hufan ee uu leeyahay ee uu uugu aaminayo dalka iyo 5 malyuun
ee qof ee ku nool. Keliya waxa uu sheegi karaa inu hebelkaasi ka xunyahay kan uu doonayo. Marka an arko qof taageersan musharax, balse aan sheegi Karin kartida iyo hufnaanta iyo taariikhda uu musharaxaa ama xisbigaa uu uugu taageersanyahay, oo isla markaana wakhti badan geliya dhaleeceynta mid kale oo kaa uu taageersanyahay la tartamaya, waxa iisoo baxa inaanu musharaxaa uu taageersanyahay aanu wax badan isla heyn, amase kan wax taageersani iska qiireysanyahay ee aanu musharaxa uu taageersanyahay waxba ka aqoon.
Qiyaastii 6 sanadood ka hor, dalka waxa loo ololeynayey xisbiyadii tartamayey ee soo sharaxayey xildhibaanada ama kuwii u tartamayey madaxweynanimada. Qof walbaa waxa uu ammaanayey shakhsi iyo xisbi uu lahaa kanaa ah kii dalka horumarka gaadhsiinayey. Markii doorashadii dhamaatey ee dawladii cusbeyd la dhisey oo qiyaastii 100 maalmood laga soo wareegay, waxa bilaabmey cabasho iyo calaacal iyo is eedeyn. Dadkii xiiqsanaaa badankoodii, waxa ay bilaabeen iney eedeeyaan kuwii ay u ololeynayeen. 5 tii sanadood ee la soo dhaafey waxa ay dadkaa ku dhaaftey hiif iyo yuus iyo shir jaraa’d iyo niyad jab iyo cimaamado badan oo la soo iibsado si inta madaxa loogu duubto la yidhaa beesha reer hebel ayaa hadashey.
Qaar waxa ay ka cabanayaan xisbigoodii oo ay leeyihiin dariiqii loogu tala galay ayuu ka leexdey, balse ma sheegayaan dariiqaasi kuu ahaa iyo sida looga leexdey, waayo marka horeba caadifad ayuubuu ku raacsanaa ee waxba lagulama heshiin. Kan uu dhaliilayaa waa isla qofkii ooney waxba iska bedelin. Ka isbedeley waa kan marna xiiqsan ee durbaanka tumaya marba caytamaya. Qaar waxa ay ka cabanayaan guddoomiyahoodii xisbiga oo ay leeyihiin taladii ayuu la lumey, halka qaarna leeyihiin dawladii sidii laga filayey wey noqonweydey. Xaqiidu waxa ay tahay kan ololeynaya ayaan garaneyn waxa uu doonayo, haddii uu garanayana cidna uumuu sharixin ee isaga uunbaa niyadda ku heystey oo kolba meel u ordaya.
Isla dadkii 5 tii sanadood ee la soo dhaafey cabaneyey ayaa iminka sida ay u dhamaayeen olole cid kale oo la mida ah kuwii ay hore uugu ololeeyeen ee ay hadana ka niyad jabeen iminkana u ololeynaya. Umadaha iyo dadkuba waxa ay sameeyaan isqiimeyn la yidhaa casharkii iyo waaya-aragnimadii arinkaa laga bartey iyo sidii loo sixi lahaa wixii qaldamey. Umaddeena badankeedu casharba ma barato. 100 siyaasi iyo odayaal 5 sanadood ka cabanayey xisbi hebel iyaga oo sidoodii u duuduuban ayay xisbi hebel kale galeen iyaga oo aan xisbigaa hordhigin waxa ay rabaan iyo waxa ay ka soo cadhoodeen iyo waxa ay rabaan iney saxaan. Iyaga waxa soo weydaartey 100 kale oo xisbigan kuwani soo galayaan ka cadhoodey oo u socda xisbigii kale ee laga soo cadhoodey. Gabigooduba waa cadho cadho weydaaratey.
Dadka qaarkii waaba taageerayaal wax saluugsan oo ay ka yara qasantahay. Balse ka warran kuwa xisbiyada ay hoggaanka ka ahaayeen iyo dawladdii ay 5 ta sanadood ku jireen ee ay wax ku noqdeen ee ay isku filnaansho dhaqaale iyo kasooni siyaasadeedba ka heley ee inta ay ku soo noqdeen shicibkii oo weli taagan halkii ay 5 sanadood kaga tegeen uugu waramaya xisbigii ayaa sidaa la yidhi iyo dawladii ayaa sidaa la yidhi. Dawladda ad sheegeysaa waa adiga ee yaa kale ee ad ka cabaneysaa. Qofka isagii aradan ee faramadhni taagani, muxuu tari karaa ka isaga taageersan ee nafta moodayaa. Hoggaamiyahaa laftiisa ayaaney marka horeba u cadeyn waxa uu xisbigaa uu uugu jiro. Waxa laga yaabaa inu marka horeba danyar oo gaaban uugu jirey oo uu iminkana ka waayey. Ma adoo xisbigii ad wax ka aheyd waxba ka soo bedeli kari waayey ayaad mid kale oo la ogyahay in dani ku badday wax ku soo kordhin kartaa.
Donald Trump oo ah musharax u tartamaya jagada madaxweynaha dalka mareykanka, waxa uu caan ku yahay inu yahay nin taageersan dadka caddaanka ah, ka soo horjeeda qaxootiga, aad uuga soo horjeeda dadka muslimka ah, jecel inu waxkasta ka horeysiiyo danta mareykanka. Dad badan waxa ay u arkaan nin waalan oo xagjir ah. Balse dad badan ayaa u arka inu madaxweyne wanaagsan noqon karo. Donald Trump uu karaa inu ku hadlo hadal wanaagsan oo dadka raaligeliya oo wada macaan. Balse wuxu taa ka doorbidey inu ku adkeysto mawqifkaa xagjirka ah oo lagu doorto.
Qof kasta oo siyaasi ah, gaar ahaan marka uu rabo inu ummad hoggaamiyo ee uu ololaha doorashad ku jiro, waxa muhiim ah inu leeyahay sumad u gaara oo lagu yaqaan. Waa inu leeyahay mabda’ uu rumeysanyahay oo cad oo uu dadka u soo bandhigo. Waa inuu hadalkiisu ka duwanyahay siyaasiyiinta kale oo lagaga soo sooci karaa. Waa inu leeyahay halkudhegyo macne u sameynaya dadka. Waa inu leeyahay xamaasad iyo muuqaal u gaar ah. Takale, musharaxu waa inu leeyahay mabaadii’ uu aaminsanyahay oo uu rabo inu dalka ku hago. Mabaadi’daana waanu inu si cad u soo bandhigaa isaga oo adeegsanaya qawaaniin aqooneed sida dhaqaalaha ama siyaasadda. Waxa kale oo uu mabaadii’diisa ku xoojin karaa taariikhdiisa oo ka markhaati kici karta inu yahay qof aaminsan waxan uu ku doodayo.
Marka uu qofku la soo taaganyahay uun idoorta, balse aanu soo bandhigin wax lagu dooranayo, waxa uu mushkilad iyo dawakh ku dhex abuurayaa umadda. Musharaxa yidhaa anigu waxa an ahay xisbi Islaami ah, dalkana waxa an ku dhaqayaa shareecada oo sideedii ah, waa wax la gartey. Musharaxa yidhaa, shanta sanadood ee an xilka an hayo, waxa an ka rumeynayaa in cuntada dalka lagu cuno 50% waddanka gudihiisa laga soo saaro oo la yareeyo waxa dibedda laga soo iibsanayo, waa war cad. Musharaxa yidhaa yidhaa ardeyda dugsiga sare iyo jaamacadaha ka soo baxa waxa an u dirayaa sannad shaqo qaran ah oo ay ku jirto 6 bilood oo ay bartaan hubka fudud iyo dagaalka, waa arin la gartey. Musharaxa yidhaa cashuurta jaadka iyo sigaarka iyo cadarka iyo baabuurta xaragada waxa an kordhinayaa 300% si dhaqaalaha ka soo baxa an u geliyo kor u qaadka waxbarashada iyo biyo loo soo saaro reer miyiga, taasina waa war la gartay.
Nashqadda yar ee lakala naqilanayo oo isu wada eegi waxba ma tareyso. Mid ayaa hal maalaya, kii kalena waxa uu ka daba maalaya sac. Mid ayaa tuulo heblaayo tegeya, mid kalaa isna tuulo kale tegeya. Mid ayaa London tegeya mid kalaa Toronto tegeyaa. Hugunka uunbuu mid kastaa isleeyahay yaan lagaa badin mooyee, balse meelna kama sheegayo wax cusub iyo waxa uu kaga duwanyahay kan kale.
Muxuu xalku noqonayaa?
1. Qofka shicibka ah waxa ku waajib ah inu siyaasadda umaddiisa lagu maamulayo qeyb ka ahaadaa oonu hareerta uun ka daawan. Taasi waa arin fiican haddey tahay ka wax ka dooranaya iyo haddey tahay hoggaamiyaha la dooranayo. Dad ayaa ku dooda, hebelow ama heblaayow siyaasadda ha gelin dadku iminka ayay ku jecelyihiin oo wey ku niciye. Haddii aanu qofka wanaagsani gelin siyaasadda, waxa fursad helaya kii la’aadka ahaa oo inta uu awood yeesho isaga oo caqli xun kugu maamule oo aanad diidi Karin. Markaa waa muhiim in dhegtu ku taagnaato oo ad ka warheyso waxa socda.
2. Qofku isaga ama iyada oo aan kolba meel ordin, waxa haboon inu la xisaabtamo xisbiga uu ku jiro oo uu si hufan u garto waxa mabdi’iisu yahay, sida mustaqbalka wax loo wadayo. Haddii adoon xisbigaba la soo xisaabtamin ad indho la’aan uun uugu ololeyso ood mardanbe oo talo faro ka haadey uun isweydiiso sida ay wax yihiin, wey adkaaneysa inad wax saxdo waayo taladu xiligii ay joogtey kamaad hadal.
3. Dhalinyaradu da’doodu u dhexeyso 18 – 40 waxa ay leeyihiin 73% codka doorashada, balse musharixii wax badan oo rasiin ah uuma sheegayo dhalinyarada ee waxa uu wakhtigiisii ku lumiyey dadka 50 ka weyn iyo caruur qeylineysa. Waa muhiim in dhalinyaro kasta ay iskaashadaan oo ay xisbiga ay taageersanyihiin soo fadhiisiyaan madaxdiisa oo ay si cad u weydiiyaan barnaamijka uu u hayo ee uu mustaqbal uugu abuurayo. Xisbigaaga dhexdiisa ka dagaalan adoon ka dudin. Taasi waxa ay keeneysaa in 3 da xisbiba boodhka iska tumaan oo ay soo xisaabtamaan oo ay soo bandhigaan barnaamij laga soo shaqeeyey. Yaan sidii xoolaha uun lagu tirsan.
4. Waxa la joogaa xiligii uu qof walbaa la xisaabtami lahaa musharaxiisa ee uu weydiin lahaa waxa uu ka qabo dhaqaalaha, waxa uu ka qabo reer miyiga cadilan, waxa uu ka qabo dhalinyarada wax baratey iyo shaqo la’aanta, waxa uu ka qabo Puntland iyo muran ina dhex yaala, waxa uu ka qabo cashuurta, waxa uu ka qabo jaadka umaddii ragaadiyey. Maaha oo keli ah inu musharaxu ku hadlo hadalkii idaacadaha ee ahaa wax walba heersare ayaan ka dhigeynaa. Balse inanad ka dhageysan hadal madhan ee ad tidhaa soo bandhig isteraatejiyadii ad horumarkaa ku keeni laheyd iyo halkii ad dhaqaalaha ka keeni laheyd. Haddii hoggaamiyihii u arkayo inad xisaab la’aan ku raaceyso, muxuu uuga baahanyahay inu dedaalo.
Haddii aan taa la yeelin, waa sannadlkan oo an olole ku mashquulno iyo 5 ta sanadood ee ku xiga oo an cabasho iyo yuus la yuururno.
Maxamed Cali Bile
Aqoonta U Adeegta Nolosha